အကွက်ဝိုက်ရောင်းတဲ့မြေကို ဝယ်လိုသူများ အထူးသတိပြုစရာ - Myanmar Builders Guide
ယခုဆိုရင်လယ်မြေတွေကိုလည်းအကွက်ရိုက်ပြီးတချို5ရောင်းချနေသည်ကိုတွေရှိရပါသည်။ ဈေးအရမ်းပေါတယ်ဆိုပြီးမ၀ယ်ကြပါနဲ5။ မိတ်ဆွေများအလိမ်မခံရအောင်ဝိုင်းဝန်းမေးမြန်းပေးကြပါရန်......
၁။ ပုံစံ 105 ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုအာမခံချက်လုံးဝမဟုတ်ပါကြောင်း, တည်နေရာဖော်ပြရန်, မြေအမျိုးအစားဖော်ပြရန်, အိမ်ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင်တည်နေရာညွန်းဆိုရန်, မြို5မြေဖြစ်ပါကဂရံလျှောက်ထားရာတွင်တည်နေရာညွန်းဆိုရန်, စသည်တို5အတွက်ဖြစ်ပြီးမြေစာရင်း ဌာနမှထုတ်ပေးပြီးတစ်နှစ်အတွင်းသာအကျုံးဝင်ပါကြောင်း။
၂။ လယ်မြေဖြစ်စေ, ယာမြေဖြစ်စေ, သက်ဆိုင်ရာဌာနမှပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုသေး သ. စိုက်ပျိုးရန်မှလွဲ။ အခြားနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုခွင့်လုံးဝမရှိကြောင်း။
၂။ လယ်မြေဖြစ်စေ, ယာမြေဖြစ်စေအခြားနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုလိုပါက (ဥပမာအိမ်ဆောက်ရန်, ငါးကန်တူးရန်, အုတ်စက်တည်ရန်စသည်ဖြင့်) သီးခြားလျှောက်ထားပြီးမှအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း။
<< ဘာတွ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရင် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ပြန်ကောင်းလာနိုင်တာလဲ???>>
၄။ တရားဝင်အစိုးရ၏မြို5သစ်တိုးချဲ5စီမံကိန်းမှလွဲ။ လယ်မြေ, ယာမြေကိုလူနေအိမ်ခြေအဖြစ်အကွက် ၀ိုက်ရောင်းချခြင်းသည်တရားမဝင်ကြောင်း။
၅။ မဖြစ်သေးခင်တော့အေးဆေးပါ, စာလာဖတ်နေတာ, အကုန်ဒီလိုနဲ5ပဲပြီးသွားတာပါဆိုကြပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါဥပဒေကြောင်းအရအတိအကျဆောင်ရွက်လာပါကဝယ်ယူသူများမိမိတို5ရဲ့ချွေးနည်းစာများသာဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါကြောင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက https://www.buildersguide.com.mm/ သို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်ရှင်။
Source: အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဂျာနယ်